Puntland oo Digniin Ka Soo Saartay Duufaano Roobab Wata oo Ku Soo Wajahan Xeebaha | SAHAN ONLINE
Puntland oo Digniin Ka Soo Saartay Duufaano Roobab Wata oo Ku Soo Wajahan Xeebaha
BOOSAASO –Wasiirka Kalluumaysiga iyo Khayraadka badda Puntland C/rashiid Maxamed Xirsi ayaa sheegay in duufaaano xoog leh oo roobab wata ay ku soo wajahan yihiin xeebaha Puntland, waxaana uu digniin u diray dadka xeebaha ku nool, togaga iyo dhulka godan.
Wuxuu sheegay in Duufaantu ay ka soo bilaabatay Jasiiradda Suqadara ee dalkaasi Yemen, oo 24 saac ee soo socoto ay ku dhufan doonto raasiga Xaafuun ee gobolka Karkaar ee Puntland.
“Haddii ay duufaantu raasiga timaado, labo arrimood uun bay mid noqon kartaa inay dhinac Hindiya u bayrto ama ay u bayrto dhinaca buuraha ilaa Bosaso iyo Laasqoray ee xeebaha ay ku dhufato” ayuu yiri, Wasiirku
Dhinaca kale, Wasaaradda Arrimaha gudaha Puntland iyo hay’ada ka hortega masiibooyinka ee HADMA ayaa fariimo qoraal ah oo kaga digayaan dufaanta waxay u direen guud ahaan shacabka Puntland.
“Waxaa laga baqsanyahay duufaan roob wadata oo ku soo beegan gayiga Puntland sida ay sheegeen qolyaha saadasha hawadu, Wasaaradda Arrimaha gudaha iyo Hay’adda Hadma waxay farayaan shacabka Puntland in ay ka foogaadaan meelaha biyo mareenka ah iyo dhulka godan isla markaasna loo saaro xoolaha meelaha dusha ah oo gabbaadka leh, waxay sidoo kale farayaan shacabka in aad loo feejignaado xeeb iyo dulba, miyi iyo magaalaba. Allaah ayaan badbaado waydiisannay. Wasaaradda arrimaha gudaha iyo Hay’adda Hadma”
Dhinaca kale, Hay’adda Cunnada iyo Beeraha Adduunka ee FAO ayaa ka digtay Duufaan xooggan oo loogu Magac daray ONE, taas oo kasoo ruqaansatay Waqooyiga Bad weynta Hindiya ayaa kusoo wajahan qaybo ka mid ah Soomaaliya.
Dufaantan ONE ayaa la saadaaliyay in ay saamayn doonto inta badan Gobollada Puntland iyo Somaliand 24 ilaa 48-ka Saac ee foodda inagu soo haya, lagana yaabo inay gaysato wax yeello xooggan
Duufaanatn oo ay wehliyaan Roobab Lixaad leh ayaa lagu wadaa in ay marka hore ku dhuftaan Puntland 24-ka Saac ee soo socda, iyagoo usii gudbi doona dhanka Somaliland iyo deegaannada ku xeeran.